ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ – Page4– Shangyimm
Posted on October 8, 2020 October 8, 2020 by Shangyi
အများစုက ခေါက်ဆွဲခြောက်ကို နှစ်ခြိုက်စွာ စားသုံးလေ့ ရှိကြပါတယ်။
ရေးနွေးထဲ အဆင်သင့် ထည့်စားရုံ လွယ်ကူတဲ့ ခေါက်ဆွဲခြောက် ထုပ်တွေကို နေ့စဉ် စားနေတာက ကျန်းမာရေးအတွက် အန္တရာယ် များစေပါတယ်။ ခေါက်ဆွဲခြောက်ကို
မကြာခဏ စားသုံးပေးခြင်းဖြင့် ဖော်ပြပါ အချက်တွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
– နှလုံးကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေတယ်
– နှလုံး သွေးကြော ဆိုင်ရာများ ဖြစ်စေတယ်
– သွေးချို၊ ဆီးချို ရောဂါများကို အလွယ်တကူ ဖြစ်စေတယ်
– ဟော်မုန်းဓာတ်ကို ထိခိုက်စေတယ်
– ကျောက်ကပ်ကို ထိခိုက်စေတယ်
– ကင်ဆာ ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေကို အားပေးတယ်
ဒါ့ကြောင့် ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ်ကို ကျန်းမာရေး မထိခိုက်အောင် စားသုံးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
နည်းလမ်း (၁) ပထမဆုံး ပြုတ်ထားတဲ့ အရည်ကို သွန်ပစ်ပါ။
ခေါက်ဆွဲထုပ်ကို ရေအနည်းငယ်နှင့် ထည့်ပြုပတ်ပြီးနောက်ထ ထိုရေများကို သွန်ပစ်ပါ။ ခေါက်ဆွဲတွေ မကပ်ငြိအောင် ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ်မှာပါတဲ့ ဖယောင်း (Wax) တွေ ကွာကျသွားပါလိမ့်မယ်။ ခေါက်ဆွဲကို အရည်နဲ့ စားချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ရေနွေး ထပ်ထည့်ပါ။ ဆီချက် စားမယ် ဆိုရင်တော့ ခေါက်ဆွဲပြုတ်ရည်များကို သွန်ပစ်ပြီး ခေါက်ဆွဲဖတ်များကို ရေအေး လောင်းပေးပါ။ ခေါက်ဆွဲကို သေချာကျက်မှ အရသာမှုန့်တွေကို ထည့်ပြီး သုံးဆောင်ပါ
ဒီနည်းက လုံးဝ အန္တရာယ်ကင်း တာတော့ မဟုတ်ပေမယ် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
ည်းလမ်း (၂) ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ထည့်စားပါ။
နောက်တစ်ချက်က ခေါက်ဆွဲပြုတ်ထဲကို လတ်ဆတ်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ထည့်စားသင့်ပါတယ်။ ခေါက်ဆွဲထုပ်မှာ ပါဝင်မှု နည်းတဲ့ အမျှင်ဓာတ်၊ ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓာတ် တွေကို ဟင်းသီးဟင်းရွက်များမှ ရရှိစေနိုင်တာကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးအတွက် အကောင်းဆုံး နှင့် အသင့်တော်ဆုံး နည်းလမ်းကတော့ တစ်ပတ်မှ တစ်ထုပ်သာ ခေါက်ဆွဲပြုတ်ကို စားသုံးသင့်ပါတယ်။ စားသုံးတဲ့ အခါမှာလည်း ဖော်ပြပါ နည်းလမ်းအတိုင်း စားသုံးဖို့ မမေ့ကြနဲ့နော်။
အမြားစုက ခေါကျဆှဲခွောကျကို နှဈခွိုကျစှာ စားသုံးလေ့ ရှိကွပါတယျ။
ရေးနှေးထဲ အဆငျသငျ့ ထညျ့စားရုံ လှယျကူတဲ့ ခေါကျဆှဲခွောကျ ထုပျတှကေို နစေ့ဉျ စားနတောက ကနျြးမာရေးအတှကျ အန်တရာယျ မြားစပေါတယျ။ ခေါကျဆှဲခွောကျကို
မကွာခဏ စားသုံးပေးခွငျးဖွငျ့ ဖျောပွပါ အခကျြတှကေို ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။
– နှလုံးကနျြးမာရေးကို ထိခိုကျစတေယျ
– နှလုံး သှေးကွော ဆိုငျရာမြား ဖွဈစတေယျ
– သှေးခြို၊ ဆီးခြို ရောဂါမြားကို အလှယျတကူ ဖွဈစတေယျ
– ဟျောမုနျးဓာတျကို ထိခိုကျစတေယျ
– ကြောကျကပျကို ထိခိုကျစတေယျ
– ကငျဆာ ရောဂါ ဖွဈနိုငျခွကေို အားပေးတယျ
ဒါ့ကွောငျ့ ခေါကျဆှဲခွောကျထုပျကို ကနျြးမာရေး မထိခိုကျအောငျ စားသုံးနိုငျမယျ့ နညျးလမျးမြားကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
နညျးလမျး (၁) ပထမဆုံး ပွုတျထားတဲ့ အရညျကို သှနျပဈပါ။
ခေါကျဆှဲထုပျကို ရအေနညျးငယျနှငျ့ ထညျ့ပွုပတျပွီးနောကျထ ထိုရမြေားကို သှနျပဈပါ။ ခေါကျဆှဲတှေ မကပျငွိအောငျ ခေါကျဆှဲခွောကျထုပျမှာပါတဲ့ ဖယောငျး (Wax) တှေ ကှာကသြှားပါလိမျ့မယျ။ ခေါကျဆှဲကို အရညျနဲ့ စားခငျြတယျ ဆိုရငျတော့ ရနှေေး ထပျထညျ့ပါ။ ဆီခကျြ စားမယျ ဆိုရငျတော့ ခေါကျဆှဲပွုတျရညျမြားကို သှနျပဈပွီး ခေါကျဆှဲဖတျမြားကို ရအေေး လောငျးပေးပါ။ ခေါကျဆှဲကို သခြောကကျြမှ အရသာမှုနျ့တှကေို ထညျ့ပွီး သုံးဆောငျပါ
ဒီနညျးက လုံးဝ အန်တရာယျကငျး တာတော့ မဟုတျပမေယျ ဖွဈလာနိုငျတဲ့ အန်တရာယျကို လြှော့ခပြေးနိုငျပါတယျ။
ညျးလမျး (၂) ဟငျးသီးဟငျးရှကျမြား ထညျ့စားပါ။
နောကျတဈခကျြက ခေါကျဆှဲပွုတျထဲကို လတျဆတျတဲ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျမြား ထညျ့စားသငျ့ပါတယျ။ ခေါကျဆှဲထုပျမှာ ပါဝငျမှု နညျးတဲ့ အမြှငျဓာတျ၊ ဗီတာမငျနဲ့ သတ်တုဓာတျ တှကေို ဟငျးသီးဟငျးရှကျမြားမှ ရရှိစနေိုငျတာကွောငျ့ ကနျြးမာရေးအတှကျ သငျ့တျောပါတယျ။
ကနျြးမာရေးအတှကျ အကောငျးဆုံး နှငျ့ အသငျ့တျောဆုံး နညျးလမျးကတော့ တဈပတျမှ တဈထုပျသာ ခေါကျဆှဲပွုတျကို စားသုံးသငျ့ပါတယျ။ စားသုံးတဲ့ အခါမှာလညျး ဖျောပွပါ နညျးလမျးအတိုငျး စားသုံးဖို့ မမကွေ့နဲ့နျော။
ကနျြးမာ ခမျြးသာပွီး ပြျောရှငျစရာကောငျးတဲ့ နရေ့ကျလေးကို ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစခေငျဗြာ။
Posted in ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ LeaveaComment on ခေါကျဆှဲခွောကျနှငျ့ကနျြးမာရေး
နှလုံးခုနျ ရုတျတရကျ ရပျတနျ့ စတေဲ့ ရောဂါ
Posted on October 7, 2020 October 7, 2020 by Shangyi
နှလုံးခုန် ရုတ်တရက် ရပ်တန့် စေတဲ့ ရောဂါ
ထမင်းစားပြီးတိုင်း ရေနွေးသောက်ဖို့ သတိပေးတာ တခုတည်း မဟုတ်ပဲ နှလုံးခုန် ရုတ်တရက် ရပ်တန့် စေတဲ့ ရောဂါကိုလဲ သတိပေးရာ ရောက်ပါတယ်။
တရုတ်လူမျိုး နဲ့ ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာ ထမင်းစားနေစဉ်မှာ ရေနွေးသောက်သုံးတဲ့ အလေ့ ရှိကြပါတယ်။ ရေအေး ( ရေခဲ ရေ သောက်သုံးလေ့ ) မရှိကြပါဘူး။ခုချိန်မှာ တော့ သူတို့ဆီက ထမင်းစားစဉ် ရေနွေးသောက်သုံးတဲ့ အလေ့ အထကို ပြောင်းလဲ ကျင့်သုံးသင့်ပါတယ်။
ခုဆောင်းပါးလေး က တော့ ထမင်းစားပြီး တော့ ရေခဲရေ သောက်သုံးသူတွေ အတွက်တော့ သက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ထမင်းစားပြီးတော့ ရေခဲ ရေ ဒါမှမဟုတ် အအေး တခုခု သောက်သုံးလိုက်ခြင်း ဟာ အတော်လေး အရသာရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ရေခဲရေ က နေပြီးတော့ မကြာခင်က မှ စားသုံးထားတဲ့ အစာတွေ ကို ဆီခဲ တွေ လို အစိုင်အခဲ အဖြစ် ကို ရောက်စေပါတယ်။ ပြီးတော့အဖတ်တွေကလဲ အက်စစ် အဖြစ် တုံ့ပြန်ပြီးတော့ အဲဒါတွေ ကို ဖြိုခွဲပြီးတော့ အူနံရံတွေကနေပြီး အခဲအစာတွေထက် ပိုမို လျှင်မြန်စွာ စုပ်ယူပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါ တွေ ဟာအူထဲ မှာ သွားပြီးတော့ စီတန်းနေပါပြီ ။ မကြာခင်ပဲ အဲဒါ တွေဟာ
အဆီခဲ အဖြစ်ပြောင်းလဲ သွားပြီးတော့ ကင်ဆာ ရောဂါကို ဖြစ်စေ ဖို့ ဦးတည်နိုင်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံး ကတော့ အစာ စားပြီးတိုင်းမှာ စွပ်ပြုပ် ပူပူလေး ဖြစ်ဖြစ် ရေနွေးဖြစ်ဖြစ် သောက်သုံးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
( အရေးကြီးတဲ့ နှလုံးခုန် ရုတ်တရက် ရပ်တာမျိုး)
သင်သိသင့်တာ ကတော့ နှလုံးခုန်ရုတ်တရက် ရပ်တန့်တဲ့ လက္ခဏာတွေ အားလုံးမှာ ဘယ်ဖက်လက်မောင်းကိုက် ခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါ။ မေးရိုးတလျှောက် နာကျင်လာခြင်းဟာလဲ သတိထားသင့်ပါတယ်။
(နှလုံးခုန်ရုတ်တရက် ရပ်တန့် စဉ်အတွင်းမှာတော့ သင်ဟာ ဘယ်တော့မှ ပထမရင်ဘတ်နာခြင်း ကိုခံစားရမယ်မဟုတ်ပါ။ ဖျားနာခြင်းနဲ့ ချွေးထွက်လွန်ခြင်း တွေဟာလည်း အများဆုံး လက္ခဏာတွေ ပါပဲ။ ၆၀ ရာနှုန်းသော နှလုံးခုန် ရုတ်တရက် ရပ်တန့် ကြတဲ့ သူတွေ ဟာ အိပ်ပျော်နေယင်းကနေ ပြီး ပြန်လည် နိုးထလာခြင်း မရှိတော့ ပါဘူး။ မေးရိုးနာကျင်မှု က သင့် ကိုနိုးထအောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တို့တစ်တွေ ဂရုပြုပြီး တော့ သတိထားရမှာပါ။အဲတာက ဆက်လက် အသက်ရှင် ရပ်တည်ဖို့အခွင့်အရေးကောင်းဖြစ်ပါတယ်။
ထမငျးစားပွီးတိုငျး ရနှေေးသောကျဖို့ သတိပေးတာ တခုတညျး မဟုတျပဲ နှလုံးခုနျ ရုတျတရကျ ရပျတနျ့ စတေဲ့ ရောဂါကိုလဲ သတိပေးရာ ရောကျပါတယျ။
တရုတျလူမြိုး နဲ့ ဂပြနျလူမြိုးတှဟော ထမငျးစားနစေဉျမှာ ရနှေေးသောကျသုံးတဲ့ အလေ့ ရှိကွပါတယျ။ ရအေေး ( ရခေဲ ရေ သောကျသုံးလေ့ ) မရှိကွပါဘူး။ခုခြိနျမှာ တော့ သူတို့ဆီက ထမငျးစားစဉျ ရနှေေးသောကျသုံးတဲ့ အလေ့ အထကို ပွောငျးလဲ ကငျြ့သုံးသငျ့ပါတယျ။
ခုဆောငျးပါးလေး က တော့ ထမငျးစားပွီး တော့ ရခေဲရေ သောကျသုံးသူတှေ အတှကျတော့ သကျရောကျမှု ရှိပါတယျ။ တကယျတော့ထမငျးစားပွီးတော့ ရခေဲ ရေ ဒါမှမဟုတျ အအေး တခုခု သောကျသုံးလိုကျခွငျး ဟာ အတျောလေး အရသာရှိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး ရခေဲရေ က နပွေီးတော့ မကွာခငျက မှ စားသုံးထားတဲ့ အစာတှေ ကို ဆီခဲ တှေ လို အစိုငျအခဲ အဖွဈ ကို ရောကျစပေါတယျ။ ပွီးတော့အဖတျတှကေလဲ အကျစဈ အဖွဈ တုံ့ပွနျပွီးတော့ အဲဒါတှေ ကို ဖွိုခှဲပွီးတော့ အူနံရံတှကေနပွေီး အခဲအစာတှထေကျ ပိုမို လြှငျမွနျစှာ စုပျယူပါလိမျ့မယျ။ အဲဒါ တှေ ဟာအူထဲ မှာ သှားပွီးတော့ စီတနျးနပေါပွီ ။ မကွာခငျပဲ အဲဒါ တှဟော
အဆီခဲ အဖွဈပွောငျးလဲ သှားပွီးတော့ ကငျဆာ ရောဂါကို ဖွဈစေ ဖို့ ဦးတညျနိုငျပါတယျ။
အကောငျးဆုံး ကတော့ အစာ စားပွီးတိုငျးမှာ စှပျပွုပျ ပူပူလေး ဖွဈဖွဈ ရနှေေးဖွဈဖွဈ သောကျသုံးတာ ဖွဈပါတယျ။
( အရေးကွီးတဲ့ နှလုံးခုနျ ရုတျတရကျ ရပျတာမြိုး)
သငျသိသငျ့တာ ကတော့ နှလုံးခုနျရုတျတရကျ ရပျတနျ့တဲ့ လက်ခဏာတှေ အားလုံးမှာ ဘယျဖကျလကျမောငျးကိုကျ ခွငျးမြိုးမဟုတျပါ။ မေးရိုးတလြှောကျ နာကငျြလာခွငျးဟာလဲ သတိထားသငျ့ပါတယျ။
(နှလုံးခုနျရုတျတရကျ ရပျတနျ့ စဉျအတှငျးမှာတော့ သငျဟာ ဘယျတော့မှ ပထမရငျဘတျနာခွငျး ကိုခံစားရမယျမဟုတျပါ။ ဖြားနာခွငျးနဲ့ ခြှေးထှကျလှနျခွငျး တှဟောလညျး အမြားဆုံး လက်ခဏာတှေ ပါပဲ။ ၆၀ ရာနှုနျးသော နှလုံးခုနျ ရုတျတရကျ ရပျတနျ့ ကွတဲ့ သူတှေ ဟာ အိပျပြျောနယေငျးကနေ ပွီး ပွနျလညျ နိုးထလာခွငျး မရှိတော့ ပါဘူး။ မေးရိုးနာကငျြမှု က သငျ့ ကိုနိုးထအောငျ လုပျနိုငျပါတယျ။ ကြှနျတျော တို့တဈတှေ ဂရုပွုပွီး တော့ သတိထားရမှာပါ။အဲတာက ဆကျလကျ အသကျရှငျ ရပျတညျဖို့အခှငျ့အရေးကောငျးဖွဈပါတယျ။
Posted in ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ LeaveaComment on နှလုံးခုနျ ရုတျတရကျ ရပျတနျ့ စတေဲ့ ရောဂါ
တနေ့တာ ဘယ်အချိန်မှာ ရေသောက်ရင် အကျိုးများစေလဲ
ယနေ့ခေတ်မှာ ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ရမယ်ဆိုတာ နားလည်လာကြပါပြီ။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အစားအသောက်တွေကို ရွေးစားလာကြသလို ကိုယ်လက်ကြံ့ခိုင်ရေးအတွက် Gym ကိုသွား၊ ပုံမှန်ကျန်းမာရေး ဆေးစစ်ချက်တွေပါ ဂရုတစိုက်လုပ်လာတာ မြင်တွေ့ရမှာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း တချို့အရေးကြီးတဲ့ ကျန်းမာရေး အထောက်အကူပြု အချက်အလက်တွေလည်း ရှိနေပါတယ်
ရေဟာ လူခန္ဓာကိုယ်အတွက် မရှိမဖြစ် အရေးကြီးဆုံးအရာပါ။ လူတယောက်ဟာ နေ့စဉ် အနည်းဆုံး ရေ ၈ ခွက် ကနေ ၁၀ ခွက်ထိ သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ ရေသောက်တဲ့အခါ သင့်တော်တဲ့အချိန်မှာ သောက်ပေးရင် ပိုထိ ရောက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်
ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အကျိုးများစေတဲ့ ရေသောက်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်တွေကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ တနေ့ တာ ဘယ်အချိန်တွေမှာ ရေသောက်ရင် ခန္ဓာကိုယ်ကို အကျိုးပြုစေမလဲ
ဗိုက်ထဲဘာမှ မစားရသေးခင် ရေသောက်ပေးရင် ရေဓာတ်ကို အပြည့်အဝ ပိုဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့။ ခန္ဓာကိုယ် လန်းဆန်းစေသလို မနက်စာအတွက်ပါ ပြင်ဆင်သင့်တဲ့အချိန်ပါ။ နေ့တနေ့ရဲ့ ပထမဆုံး အစားအစာကို စစားတဲ့ အချိန်ဖြစ်သလို ရေဓာတ်လည်း အပြည့်အဝ ဖြည့်သင့်တဲ့ အချိန်ကောင်းလေးပါ
ဒီအချိန်မှာလည်း ရေသောက်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။ မနက် ၁၁ နာရီဆိုတာ ထမင်းစာခါနီးဖြစ်လို့ ရေသောက်ပေးရင် နေ့လည်စာ ဗိုက်ပြည့်အောင် မစားမိစေလို့ အဆီပိုတွေ မတက်တော့ဘူးပေါ့။ ဒီ့ပြင် တနေ့ကို ရေ ၁ လီတာခွဲ သောက်ဖြစ်အောင်လည်း ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်
နေ့လည် ၁ နာရီ
တချို့တွေက နေ့လည်ထမင်းစားနေတုန်း ရေသောက်ရင် အစာမကြေဖြစ်တတ်လို့ မသောက်ဘဲ နေလေ့ ရှိပါ တယ်။ တကယ်တော့ ရလာတဲ့အကျိုးရလဒ်က ပြောင်းပြန်ပါ။ နေ့လည်စာစားရင်း သံပုရာရည်လေးညှစ်ထားတဲ့ ရေသောက်ပေးရင် အစာတောင် ပိုကြေစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်
ဒီအချိန်ဟာ နေ့လည်စာ စားချိန်နဲ့ ညစာကြား အချိန်ပါ။ ဒါကြောင့် ဒီလိုအချိန်ဆို အရည်တမျိုးမျိုး သောက်လေ့ ရှိကြပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ရေဓာတ်ဖြည့်ဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်မို့ ရေများများ သောက်ပေးပါ
ညစာမစားခင် ရေတဖန်ခွက် သောက်ပေးသင့်ပါတယ်။ ရိုးရိုးရေထက် လန်းလန်းဆန်းဆန်း ဖြစ်သွားအောင် သံပုရာသီး တစိတ်လောက် ညှစ်သောက်ပေးရင် ပိုအကျိုးများပါတယ်။ ဒီအချိန် ဇယားအတိုင်း ရေသောက်ပေးမယ် ဆိုရင် နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့ ရေပမာဏသောက် ဖြစ်သွားတာပေါ့
ယနခေ့တျေမှာ ကနျြးမာရေးကို ဂရုစိုကျရမယျဆိုတာ နားလညျလာကွပါပွီ
ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျတဲ့ အစားအသောကျတှကေို ရှေးစားလာကွသလို ကိုယျလကျကွံ့ခိုငျရေးအတှကျ Gym ကိုသှား၊ ပုံမှနျကနျြးမာရေး ဆေးစဈခကျြတှပေါ ဂရုတစိုကျလုပျလာတာ မွငျတှရေ့မှာပါ။ ဒါပမေယျ့လညျး တခြို့အရေးကွီးတဲ့ ကနျြးမာရေး အထောကျအကူပွု အခကျြအလကျတှလေညျး ရှိနပေါတယျ
ရဟော လူခန်ဓာကိုယျအတှကျ မရှိမဖွဈ အရေးကွီးဆုံးအရာပါ။ လူတယောကျဟာ နစေ့ဉျ အနညျးဆုံး ရေ ၈ ခှကျ ကနေ ၁၀ ခှကျထိ သောကျသုံးသငျ့ပါတယျ
ရသေောကျတဲ့အခါ သငျ့တျောတဲ့အခြိနျမှာ သောကျပေးရငျ ပိုထိ ရောကျတယျလို့ ဆိုပါတယျ
ခန်ဓာကိုယျအတှကျ အကြိုးမြားစတေဲ့ ရသေောကျဖို့အကောငျးဆုံးအခြိနျတှကေို ပွောပွပေးခငျြပါတယျ။ တနေ့ တာ ဘယျအခြိနျတှမှော ရသေောကျရငျ ခန်ဓာကိုယျကို အကြိုးပွုစမေလဲ
ဗိုကျထဲဘာမှ မစားရသေးခငျ ရသေောကျပေးရငျ ရဓောတျကို အပွညျ့အဝ ပိုဖွညျ့ဆညျး ပေးနိုငျပါတယျတဲ့။ ခန်ဓာကိုယျ လနျးဆနျးစသေလို မနကျစာအတှကျပါ ပွငျဆငျသငျ့တဲ့အခြိနျပါ။ နတေ့နရေဲ့ ပထမဆုံး အစားအစာကို စစားတဲ့ အခြိနျဖွဈသလို ရဓောတျလညျး အပွညျ့အဝ ဖွညျ့သငျ့တဲ့ အခြိနျကောငျးလေးပါ
မနကျ ၁၁ နာရီ
ဒီအခြိနျမှာလညျး ရသေောကျဖို့ မမပေ့ါနဲ့နျော။ မနကျ ၁၁ နာရီဆိုတာ ထမငျးစာခါနီးဖွဈလို့ ရသေောကျပေးရငျ နလေ့ညျစာ ဗိုကျပွညျ့အောငျ မစားမိစလေို့ အဆီပိုတှေ မတကျတော့ဘူးပေါ့။ ဒီ့ပွငျ တနကေို့ ရေ ၁ လီတာခှဲ သောကျဖွဈအောငျလညျး ကူညီပေးနိုငျပါတယျ
တခြို့တှကေ နလေ့ညျထမငျးစားနတေုနျး ရသေောကျရငျ အစာမကွဖွေဈတတျလို့ မသောကျဘဲ နလေေ့ ရှိပါ တယျ။ တကယျတော့ ရလာတဲ့အကြိုးရလဒျက ပွောငျးပွနျပါ။ နလေ့ညျစာစားရငျး သံပုရာရညျလေးညှဈထားတဲ့ ရသေောကျပေးရငျ အစာတောငျ ပိုကွစေတေယျလို့ ဆိုပါတယျ
ဒီအခြိနျဟာ နလေ့ညျစာ စားခြိနျနဲ့ ညစာကွား အခြိနျပါ။ ဒါကွောငျ့ ဒီလိုအခြိနျဆို အရညျတမြိုးမြိုး သောကျလေ့ ရှိကွပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျအတှကျ ရဓောတျဖွညျ့ဖို့ အကောငျးဆုံးအခြိနျမို့ ရမြေားမြား သောကျပေးပါ
ညစာမစားခငျ ရတေဖနျခှကျ သောကျပေးသငျ့ပါတယျ။ ရိုးရိုးရထေကျ လနျးလနျးဆနျးဆနျး ဖွဈသှားအောငျ သံပုရာသီး တစိတျလောကျ ညှဈသောကျပေးရငျ ပိုအကြိုးမြားပါတယျ။ ဒီအခြိနျ ဇယားအတိုငျး ရသေောကျပေးမယျ ဆိုရငျ နစေ့ဉျလိုအပျတဲ့ ရပေမာဏသောကျ ဖွဈသှားတာပေါ့
Posted in ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ LeaveaComment on တနတေ့ာ ဘယျအခြိနျမှာ ရသေောကျရငျ အကြိုးမြားစလေဲ
ဂျင်ဆင်း (Ginseng)မြစ်၏ လူ့ကျန်းမာရေးကို အကျိုးပြု စေမှုမှာ အံ့မခန်းပင် ဖြစ်သည်။ တရုတ် နိုင်ငံတွင် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၅၀၀၀ခန့်မှ ယနေ့ အချိန်ထိ ဆေးဝါးအဖြစ် သုံးစွဲ နေသော အပင် တစ်မျိုးလည်း ဖြစ်သည်။ ယင်းကို လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်စေသော ပစ္စည်း “Adaptogen” ဟုလည်း ခေါ်ဆိုကြသည်။ ကိုယ်ခန္ဓာကို စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် အခြား ရောဂါများမှ ကာကွယ်ရန် လိုက်လျော ညီထွေ ဖြစ်စေသောကြောင့် ခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။
ဂျင်ဆင်းမြစ်ကို ရေနွေးထဲသို့ လက်ဖက်ခြောက် ကဲ့သို့ခတ်ခြင်းသို့ မဟုတ်ပြုတ်ပြီး သုံးဆောင်လေ့ ရှိသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် ဆေးပြား၊ ဆေးတောင့်၊ အရည် ပုံစံများနှင့်လည်း ရရှိနိုင် နေပြီ ဖြစ်သည်။
၁။ဂျင်ဆင်းသည် စိတ်ဖိစီးမှုကို သက်သာ စေပါသည်
စိတ်ဖိစီးမှု ပမာဏကို လျော့ပါး သွားအောင်လှုံ့ဆော် ပစ္စည်း (stimulant) အဖြစ် ဆောင်ရွက် ပေးပြီး ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာ ဖြစ်ပျက်မှု များနှင့် စွမ်းအင် ကိုလည်း မြှင့်တင် ပေးနိုင်သည်။
၂။အရွယ်မတိုင်မီ အိုမင်း ရင့်ရော်ခြင်း ကိုလည်း ကာကွယ် ပေးနိုင်သည်ယင်းတွင် ပါဝင်သော ဓာတ်တိုး ဆန့်ကျင်ပစ္စည်း (anti-oxidants)များက အိုမင်း ရင့်ရော်ခြင်းကို ကာကွယ် စေနိုင်ရုံ သာမက အခြား နုပျိုစေသော ပစ္စည်း တစ်မျိုးဖြစ်သည့် maltol ကိုထွက်ရှိ စေသည်။
၃။တက်ကြွ ရွှင်လန်း စေသည်
ဂျင်ဆင်း လက်ဖက်ရည်ကို သောက်သုံးခြင်းက ဦးနှောက်ဆဲလ် များကို လှုံ့ဆော် ပေးနိုင်ပြီး အာရုံ စူးစိုက်မှု၊ အတွေး အခေါ်များနှင့် မှတ်ဥာဏ်ကို ပိုမို တိုးတက် စေသည်ဟု သိရသည်။
၄။အမျိုးသား စွမ်းရည်ကို မြင့်တက် စေသည်
အမျိုးသားများတွင် ပန်းသေ၊ ပန်းညှိုး ဖြစ်ခြင်းကို ကာကွယ် နိုင်ပြီး အိမ်ထောင်ရေး သုခကို ပိုမို ခံစားရ စေနိုင်သော အာနိသင်ရှိပြီး လိုအပ်သော ကျားဟော်မုန်း များကို သင့်တော်သော ပမာဏအတိုင်းရှိစေသည်။
၅။ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းချုပ် ပေးနိုင်သည်
ဂျင်ဆင်းသည် သဘာဝမှ ရရှိသော အစာစားချင် စိတ်ကို ထိန်းချုပ်ပေးသည့် အပင်ထွက် ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး အ၀လွန်ခြင်းကို ကာကွယ် ပေးနိုင်သည်။
၆။သွေးအချို ဓာတ်ကို ထိန်းပေး နိုင်သည်‌
‌လေ့လာမှုများအရ ဂျင်ဆင်းသည် ဆီးချို၊ သွေးချို ရောဂါရှင် များ၏ သွေးအချို ဓာတ်ပမာဏကို ထိန်းချုပ်ရာတွင် အထောက်အကူ ပြုပြီး သွေးတွင်း သကြားဓာတ် လျော့ပါး စေသော အာနိသင်လည်း ရှိနေသည်။
၇။ဓမ္မတာ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်း ပေးနိုင်သည်
အမေရိကန် နိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်သော သုတေသန အရ အမျိုးသမီး များတွင် ဂျင်ဆင်းက ဓမ္မတာ လာခါနီး နာကျင်မှုကို လျော့ပါး စေနိုင်သည်ဟု သိရသည်။
အခြားသော ဆေးဝါးနှင့် တိုင်းရင်းဆေး အာနိသင် များကဲ့သို့ပင် ဂျင်ဆင်းသည်လည်း ဆရာဝန်၏ ညွှန်ကြားချက် အတိုင်း အသုံးပြု သင့်သော အပင်ထွက် ပစ္စည်း ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် များနှင့် နို့တိုက် မိခင်များတွင် အခြား ဆေးဝါးများနှင့် တွဲဖက် မသောက်သုံး သင့်ကြောင်းကို ကျန်းမာရေး ပညာရှင်များက တိုက်တွန်းထားသည်။
ဂငျြဆငျး (Ginseng)မွဈ၏ လူ့ကနျြးမာရေးကို အကြိုးပွု စမှေုမှာ အံ့မခနျးပငျ ဖွဈသညျ။ တရုတျ နိုငျငံတှငျ လှနျခဲ့သော နှဈပေါငျး ၅၀၀၀ခနျ့မှ ယနေ့ အခြိနျထိ ဆေးဝါးအဖွဈ သုံးစှဲ နသေော အပငျ တဈမြိုးလညျး ဖွဈသညျ။ ယငျးကို လိုကျလြောညီထှေ ဖွဈစသေော ပစ်စညျး “Adaptogen” ဟုလညျး ချေါဆိုကွသညျ။ ကိုယျခန်ဓာကို စိတျဖိစီးမှုနှငျ့ အခွား ရောဂါမြားမှ ကာကှယျရနျ လိုကျလြော ညီထှေ ဖွဈစသေောကွောငျ့ ချေါဆိုခွငျး ဖွဈသညျ။
ဂငျြဆငျးမွဈကို ရနှေေးထဲသို့ လကျဖကျခွောကျ ကဲ့သို့ခတျခွငျးသို့ မဟုတျပွုတျပွီး သုံးဆောငျလေ့ ရှိသညျ။ ယနခေ့တျေတှငျ ဆေးပွား၊ ဆေးတောငျ့၊ အရညျ ပုံစံမြားနှငျ့လညျး ရရှိနိုငျ နပွေီ ဖွဈသညျ။
၁။ဂငျြဆငျးသညျ စိတျဖိစီးမှုကို သကျသာ စပေါသညျ
စိတျဖိစီးမှု ပမာဏကို လြော့ပါး သှားအောငျလှုံ့ဆျော ပစ်စညျး (stimulant) အဖွဈ ဆောငျရှကျ ပေးပွီး ဇီဝကမ်မဆိုငျရာ ဖွဈပကျြမှု မြားနှငျ့ စှမျးအငျ ကိုလညျး မွှငျ့တငျ ပေးနိုငျသညျ။
၂။အရှယျမတိုငျမီ အိုမငျး ရငျ့ရျောခွငျး ကိုလညျး ကာကှယျ ပေးနိုငျသညျ။ ယငျးတှငျ ပါဝငျသော ဓာတျတိုး ဆနျ့ကငျြပစ်စညျး (anti-oxidants)မြားက အိုမငျး ရငျ့ရျောခွငျးကို ကာကှယျ စနေိုငျရုံ သာမက အခွား နုပြိုစသေော ပစ်စညျး တဈမြိုးဖွဈသညျ့ maltol ကိုထှကျရှိ စသေညျ။
၃။တကျကွှ ရှငျလနျး စသေညျ
ဂငျြဆငျး လကျဖကျရညျကို သောကျသုံးခွငျးက ဦးနှောကျဆဲလျ မြားကို လှုံ့ဆျော ပေးနိုငျပွီး အာရုံ စူးစိုကျမှု၊ အတှေး အချေါမြားနှငျ့ မှတျဉာဏျကို ပိုမို တိုးတကျ စသေညျဟု သိရသညျ။
၄။အမြိုးသား စှမျးရညျကို မွငျ့တကျ စသေညျ။ အမြိုးသားမြားတှငျ ပနျးသေ၊ ပနျးညှိုး ဖွဈခွငျးကို ကာကှယျ နိုငျပွီး အိမျထောငျရေး သုခကို ပိုမို ခံစားရ စနေိုငျသော အာနိသငျရှိပွီး လိုအပျသော ကြားဟျောမုနျး မြားကို သငျ့တျောသော ပမာဏအတိုငျးရှိစသေညျ။
၅။ကိုယျအလေးခြိနျကို ထိနျးခြုပျ ပေးနိုငျသညျ။ ဂငျြဆငျးသညျ သဘာဝမှ ရရှိသော အစာစားခငျြ စိတျကို ထိနျးခြုပျပေးသညျ့ အပငျထှကျ ပစ်စညျးဖွဈပွီး အဝလှနျခွငျးကို ကာကှယျ ပေးနိုငျသညျ။
၆။သှေးအခြို ဓာတျကို ထိနျးပေး နိုငျသညျ။ လလေ့ာမှုမြားအရ ဂငျြဆငျးသညျ ဆီးခြို၊ သှေးခြို ရောဂါရှငျ မြား၏ သှေးအခြို ဓာတျပမာဏကို ထိနျးခြုပျရာတှငျ အထောကျအကူ ပွုပွီး သှေးတှငျး သကွားဓာတျ လြော့ပါး စသေော အာနိသငျလညျး ရှိနသေညျ။
၇။ဓမ်မတာ ပွဿနာမြားကို ဖွရှေငျး ပေးနိုငျသညျ။ အမရေိကနျ နိုငျငံတှငျ ပွုလုပျသော သုတသေန အရ အမြိုးသမီး မြားတှငျ ဂငျြဆငျးက ဓမ်မတာ လာခါနီး နာကငျြမှုကို လြော့ပါး စနေိုငျသညျဟု သိရသညျ။
အခွားသော ဆေးဝါးနှငျ့ တိုငျးရငျးဆေး အာနိသငျ မြားကဲ့သို့ပငျ ဂငျြဆငျးသညျလညျး ဆရာဝနျ၏ ညှနျကွားခကျြ အတိုငျး အသုံးပွု သငျ့သော အပငျထှကျ ပစ်စညျး ဖွဈသညျ။ ကိုယျဝနျဆောငျ မြားနှငျ့ နို့တိုကျ မိခငျမြားတှငျ အခွား ဆေးဝါးမြားနှငျ့ တှဲဖကျ မသောကျသုံး သငျ့ကွောငျးကို ကနျြးမာရေး ပညာရှငျမြားက တိုကျတှနျးထားသညျ။
credit to ကနျြးမာရေးအတှကျဆေးတဈခှကျ
Posted in ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ LeaveaComment on ဂငျြဆငျး၏ကနျြးမာရေးအာနိသငျမြား
Posted on October 6, 2020 October 6, 2020 by Shangyi
အအေးမိတဲ့အခါ၊ တုပ်ကွေးမိတဲ့အခါ၊ နှာစေး၊ နှာခေါင်းပိတ်တဲ့အခါ၊ သလိပ်ကပ်အခါတွေမှာ မုန့်ညင်းဆီကို ရှူရှိုက်လိုက်ရင် အခိုးပွင့်ပြီး ချွဲသလိပ်ပါ ပါလာစေပါတယ်။
မုန်ညှင်းစေ့အနက်ကို ငရုတ်ကောင်းမှုန့်လို ဖြူးစားပါက မုန့်ညင်းစေ့မှ Myrosin နဲ့ Sinigrin လို့ခေါ်တဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေကြောင့် ချွဲသလိပ်တွေကို အရည်ပျော်စေကာ အလွယ်တကူ ဟပ်ထုတ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
မုန်ညှင်းစေ့အနက် စားပွဲတင်ဇွန်း တစ်ဇွန်းစာကိုကြိတ်ပြီး ဂျုံမှုန့် ၊ရေတို့နဲ့ ရောနှယ် ရင်ဘတ်တွင်အုံပေးရင် ချွဲသလိပ်ပျော်စေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီအုံဆေးမအုံခင်မှာ အရေပြား မလောင်အောင် ဗက်စလင်းလိမ်းဆေး ပါးပါးလေးကြိုတင်လိမ်းပြီးမှ အပေါ်က လူးလိမ်းရန် အရေးကြီးပါတယ်။
– ၁၅မိနစ်ထက်ကြာအောင်လည်း မထားသင့်ပါဘူး။ အရေပြား လောင်သွားနိုင်လို့ပါ။
(အရေးကြီးသည်မှာ မုန်ညင်းစေ့၊ မုန်ညင်းဆီတို့ကို ကိုင်တွယ်ပြီးရင် လက်ကို သေချာဆေးကြောပြီးမှ မျက်လုံး၊ နှာခေါင်း၊ ပါးစပ်တို့ကိုကိုင်တွယ်ရပါမယ်။)
ရေခပ်နွေးနွေးလေးထဲမှာ မုန်ညင်းစေ့အမှုန့် ထည့်ပြီး ခြေထောက်ကို စိမ်ပေးရင် ဦးခေါင်းအအေးမိခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
– ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာကို သက်သာပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာ သိပ္ပံနည်းသဘောတရားအရတော့ မုန့်ညင်းစေ့ရဲ့ အပူဓာတ်ကြောင့် ခြေထောက်သို့ပို့လွှတ်နေသော သွေးကြောများပွင့်ကုန်ပြီး ခြေထောက်သို့ သွေးလှည့်ပတ်ရောက်ရှိမှုပိုများလာကာ ခြေထောက်မှတစ်ဆင့် အပူထွက်ကုန် ပြီး၊ ဦးနှောက်သို့သွားသော သွေးဖိအားလျော့ကျလာကြောင့် ခေါင်းကိုက်သက်သာရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အအေးမိတဲ့အခါ၊ တုပျကှေးမိတဲ့အခါ၊ နှာစေး၊ နှာခေါငျးပိတျတဲ့အခါ၊ သလိပျကပျအခါတှမှော မုနျ့ညငျးဆီကို ရှူရှိုကျလိုကျရငျ အခိုးပှငျ့ပွီး ခြှဲသလိပျပါ ပါလာစပေါတယျ။
မုနျညှငျးစအေ့နကျကို ငရုတျကောငျးမှုနျ့လို ဖွူးစားပါက မုနျ့ညငျးစမှေ့ Myrosin နဲ့ Sinigrin လို့ချေါတဲ့ ဓာတုပစ်စညျးတှကွေောငျ့ ခြှဲသလိပျတှကေို အရညျပြျောစကော အလှယျတကူ ဟပျထုတျနိုငျစှမျးရှိပါတယျ။
မုနျညှငျးစအေ့နကျ စားပှဲတငျဇှနျး တဈဇှနျးစာကိုကွိတျပွီး ဂြုံမှုနျ့ ၊ရတေို့နဲ့ ရောနှယျ ရငျဘတျတှငျအုံပေးရငျ ခြှဲသလိပျပြျောစပေါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဒီအုံဆေးမအုံခငျမှာ အရပွေား မလောငျအောငျ ဗကျစလငျးလိမျးဆေး ပါးပါးလေးကွိုတငျလိမျးပွီးမှ အပျေါက လူးလိမျးရနျ အရေးကွီးပါတယျ။
– ၁၅မိနဈထကျကွာအောငျလညျး မထားသငျ့ပါဘူး။ အရပွေား လောငျသှားနိုငျလို့ပါ။
(အရေးကွီးသညျမှာ မုနျညငျးစေ့၊ မုနျညငျးဆီတို့ကို ကိုငျတှယျပွီးရငျ လကျကို သခြောဆေးကွောပွီးမှ မကျြလုံး၊ နှာခေါငျး၊ ပါးစပျတို့ကိုကိုငျတှယျရပါမယျ။)
ရခေပျနှေးနှေးလေးထဲမှာ မုနျညငျးစအေ့မှုနျ့ ထညျ့ပွီး ခွထေောကျကို စိမျပေးရငျ ဦးခေါငျးအအေးမိခွငျးကိုကာကှယျနိုငျပါတယျ။
– ခေါငျးကိုကျဝဒေနာကို သကျသာပြောကျကငျးနိုငျပါတယျ။
ဒါဟာ သိပ်ပံနညျးသဘောတရားအရတော့ မုနျ့ညငျးစရေဲ့ အပူဓာတျကွောငျ့ ခွထေောကျသို့ပို့လှတျနသေော သှေးကွောမြားပှငျ့ကုနျပွီး ခွထေောကျသို့ သှေးလှညျ့ပတျရောကျရှိမှုပိုမြားလာကာ ခွထေောကျမှတဈဆငျ့ အပူထှကျကုနျ ပွီး၊ ဦးနှောကျသို့သှားသော သှေးဖိအားလြော့ကလြာကွောငျ့ ခေါငျးကိုကျသကျသာရခွငျးဖွဈတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
Posted in ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ LeaveaComment on မုနျညှငျးစရေဲ့ အစှမျး
ထိပျပွောငျသူ၊ ဆံပငျကြှတျလှယျသူ၊ ဆံပငျပါးသူမြားအတှကျ အလှနျထိရောကျပွီး လှယျကူတဲ့ဆေးနညျး
Posted on October 5, 2020 October 5, 2020 by Shangyi
ထိပ်ပြောင်သူ၊ ဆံပင်ကျွတ်လွယ်သူ၊ ဆံပင်ပါးသူများအတွက် အလွန်ထိရောက်ပြီး လွယ်ကူတဲ့ဆေးနည်း
ကျွန်တော့်အသက် ၁၇နှစ်အရွယ်ဘ၂၀၀၉ခုနှစ်ကစပြီး အဘိုးကြီးတစ်ယောက်လိုထိပ်ပြောင်သွားပါတယ် ယခုအချိန်ထိပါ နဖူးထိပ်မှစပြီး အလယ်ဗွေနေရာထိပြောင်သွားပါတယ် ဦးထုပ်ဆောင်းတဲ့အကျင့်လည်းမရှိပါ ကျွန်တော့်ကိုမသိတဲ့လူတွေဆိုရင် ကျွန်တော့်ကိုအသက်ကြီးတဲ့လူလို့ထင်နေကြတယ်
ဆံပင်ပြန်ပေါက်အောင် ပရန္န ဝါရွက်ကို ထောပတ်၊နှမ်းဆီ၊ပျားရည်(၃)မျိုးနဲ့ရောပြီးယိုထိုးစားပါ။ မနက်ည ဟင်းစားဇွန်းတစ်ဇွန်း စားပါ။ ရေခေါင်းလောင်းချိုးပါ။ နေ့စဉ်ဝမ်းနုတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးစားပါ။ လက်တွေ့ပြန်ပေါက်သူရှိပါသည်။ ဦးခေါင်းတွင်ထောလပတ်ရွက်အရည်ညှစ်ပြီး ပွတ်ပေးလျှင် လည်း ပြန်ပေါက်နိုင်ပါသည်။
ကြှနျတေျာ့အသကျ ၁၇နှဈအရှယျဘ၂၀၀၉ခုနှဈကစပွီး အဘိုးကွီးတဈယောကျလိုထိပျပွောငျသှားပါတယျ ယခုအခြိနျထိပါ နဖူးထိပျမှစပွီး အလယျဗှနေရောထိပွောငျသှားပါတယျ ဦးထုပျဆောငျးတဲ့အကငျြ့လညျးမရှိပါ ကြှနျတေျာ့ကိုမသိတဲ့လူတှဆေိုရငျ ကြှနျတေျာ့ကိုအသကျကွီးတဲ့လူလို့ထငျနကွေတယျ
ဆံပငျပွနျပေါကျအောငျ ပရန်န ဝါရှကျကို ထောပတျ၊နှမျးဆီ၊ပြားရညျ(၃)မြိုးနဲ့ရောပွီးယိုထိုးစားပါ။ မနကျည ဟငျးစားဇှနျးတဈဇှနျး စားပါ။ ရခေေါငျးလောငျးခြိုးပါ။ နစေ့ဉျဝမျးနုတျဆေးတဈမြိုးမြိုးစားပါ။ လကျတှပွေ့နျပေါကျသူရှိပါသညျ။ ဦးခေါငျးတှငျထောလပတျရှကျအရညျညှဈပွီး ပှတျပေးလြှငျ လညျး ပွနျပေါကျနိုငျပါသညျ။
crd,Kyi Lwin Myint – Mudra’
Posted in ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ LeaveaComment on ထိပျပွောငျသူ၊ ဆံပငျကြှတျလှယျသူ၊ ဆံပငျပါးသူမြားအတှကျ အလှနျထိရောကျပွီး လှယျကူတဲ့ဆေးနညျး
သြဇာသီးကတော့ မြန်မာလူမျိုးတွေ နှစ်ခြိုက်စွာ စားသုံးကြတဲ့ အသီးတစ်မျိုးပါ..
သြဇာသီးကို အိမ်မှာ အလွယ်တကူစိုက်ပျိုးလို့ရသလို ဈေးနှုန်းချိုချိုနဲ့ ၀ယ်ယူစားသုံးလို့ရပါတယ်..
အဖိုးနည်းပေမယ့် ကျန်းမာရေးအတွက်အကျိုးကျေးဇူးများတာမို့ သြဇာသီးရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
မကြာသေးခင်က သုတေသနပြုချက်အရ သြဇာသီးဟာ ကင်ဆာဆဲလ်တွေကို တိုက်ဖျက်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်..
အဆုတ်ကင်ဆာ၊ အူမကြီးကင်ဆာ၊ အသည်းကင်ဆာ၊ သရက်ရွက်ကင်ဆာ၊ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ၊ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ၊ သားအိမ်ကင်ဆာနဲ့ ရင်သားကင်ဆာတို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ ကင်ဆာဆဲလ်တွေကိုတိုက်ဖျက်နိုင်ပါတယ်.
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Nebraska တက္ကသိုလ်ရှိ ရောဂါဗေဒပညာရှင်တစ်ဦးက သရက်ရွက်ကင်ဆာကို ကုသရာမှာ သြဇာသီးကအာနိသင်တွေများစွာရှိတယ်ဆိုတာကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်..
သြဇာသီးဟာ ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ အကြိတ်ဖြစ်ပွားမှုကို သိသိသာသာလျှော့ချပေးနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်..
အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ ဆဲလ်တွေကို တိုက်ဖျက်ရာမှာလည်း
Adriamycin ဆေးထက် ပိုပြီး အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိတယ်ဆိုတာကို လက်တွေ့စမ်းသတ်ခန်းလေ့လာမှုတွေက ပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်…
အမျိုးသမီးတွေအတွက် ရင်သားကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကို ကုသရာမှာလည်းများစွာထိရောက်မှုရှိပါတယ်..
ဒါ့အပြင် တခြားကင်ဆာအမျိုးအစားတွေကို ကုသရာမှာလည်း သြဇာသီးက အထောက်အပံ့ဖြစ်စေပါတယ်
သွဇာသီးကတော့ မွနျမာလူမြိုးတှေ နှဈခွိုကျစှာ စားသုံးကွတဲ့ အသီးတဈမြိုးပါ..
သွဇာသီးကို အိမျမှာ အလှယျတကူစိုကျပြိုးလို့ရသလို ဈေးနှုနျးခြိုခြိုနဲ့ ဝယျယူစားသုံးလို့ရပါတယျ..
အဖိုးနညျးပမေယျ့ ကနျြးမာရေးအတှကျအကြိုးကြေးဇူးမြားတာမို့ သွဇာသီးရဲ့ အကြိုးကြေးဇူးတှကေို မြှဝလေိုကျပါတယျ။
မကွာသေးခငျက သုတသေနပွုခကျြအရ သွဇာသီးဟာ ကငျဆာဆဲလျတှကေို တိုကျဖကျြနိုငျတယျလို့ ဆိုပါတယျ..
အဆုတျကငျဆာ၊ အူမကွီးကငျဆာ၊ အသညျးကငျဆာ၊ သရကျရှကျကငျဆာ၊ သားအိမျခေါငျးကငျဆာ၊ ဆီးကြိတျကငျဆာ၊ သားအိမျကငျဆာနဲ့ ရငျသားကငျဆာတို့ကိုဖွဈစတေဲ့ ကငျဆာဆဲလျတှကေိုတိုကျဖကျြနိုငျပါတယျ.
အမရေိကနျပွညျထောငျစု Nebraska တက်ကသိုလျရှိ ရောဂါဗဒေပညာရှငျတဈဦးက သရကျရှကျကငျဆာကို ကုသရာမှာ သွဇာသီးကအာနိသငျတှမြေားစှာရှိတယျဆိုတာကို တှရှေိ့ခဲ့ပါတယျ..
သွဇာသီးဟာ ကငျဆာဖွဈစတေဲ့ အကွိတျဖွဈပှားမှုကို သိသိသာသာလြှော့ခပြေးနိုငျတယျလို့လညျးဆိုပါတယျ..
အူမကွီးကငျဆာဖွဈစတေဲ့ ဆဲလျတှကေို တိုကျဖကျြရာမှာလညျး
Adriamycin ဆေးထကျ ပိုပွီး အကြိုးကြေးဇူးမြားစှာရှိတယျဆိုတာကို လကျတှစေ့မျးသတျခနျးလလေ့ာမှုတှကေ ပွသနိုငျခဲ့ပါတယျ…
အမြိုးသမီးတှအေတှကျ ရငျသားကငျဆာဖွဈပှားမှုကို ကာကှယျပေးနိုငျပွီး သားအိမျခေါငျးကငျဆာကို ကုသရာမှာလညျးမြားစှာထိရောကျမှုရှိပါတယျ..
ဒါ့အပွငျ တခွားကငျဆာအမြိုးအစားတှကေို ကုသရာမှာလညျး သွဇာသီးက အထောကျအပံ့ဖွဈစပေါတယျ
CREDIT TO … MyFood Myanmar
Posted in ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ LeaveaComment on ကငျဆာဆဲလျတှကေို သစေနေိုငျတဲ့ သွဇာသီး
သှားပိုးစားခွငျးနဲ့ သှားအခေါငျးပေါကျဖွဈခွငျးကို သကျသာစမေယျ့ သဘာဝနညျးလမျး
Posted on October 4, 2020 October 4, 2020 by Shangyi
လေးညှင့်ပွင့်ဆီ ၂ စက် ၃ စက် နဲ့ နှမ်းဆီ စားပွဲတင်ဇွန်း ၁/၄ ပုံထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ဝါဂွမ်းလေးနဲ့ တို့ပြီး သွားနားမှာ ကပ်ပေးထားပါ။ ညအိပ်ယာမ၀င်ခင်တိုင်းလုပ်ပေးပါ။ လေးညှင်းဆီကို မခဏခဏမသုံးဖို့လိုပါတယ်။
ဆားကိုလည်း သွားပိုးစားခြင်း သွားအခေါင်းပေါက်ဖြစ်ခြင်းကနေ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် သွားကိုက်ခြင်းနဲ့ တခြား ကူးစက်ရောဂါတွေကို ကာကွယ်ဖို့သုံးနိုင်ပါတယ်။
ဆား လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်းကို ရေနွေးတစ်ခွက်နဲ့ရောလိုက်ပါ။ ပြီးရင် ငုံပြီး ၁ မိနစ်လောက် ပလုတ်ကျင်းလိုက်ပါ။ တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
သွားပိုးစားခြင်း၊ သွားခေါင်ပေါက်ဖြစ်ခြင်းကို သက်သာစေဖို့သာမက သွားဖုံးသွေးယိုခြင်းနဲ့ ခံတွင်းနံ့ဆိုးတာကိုပါသက်သာစေဖို့အတွက် နှမ်းဆီ စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်း ကို ပါးစပ်ထဲထည့်ပြီး ငုံထားပါ။ ပြီးရင် မိနစ် ၂၀ လောက်ဖြည်းဖြည်းချင် ပလုတ်ကျင်းနေပါ။ ဆီကိုမမြိုချဘဲ ထွေးထုတ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ရေနွေးလေးနဲ့ ဆေးချပါ။ ဆားရည်နဲ့လည်း ဆေးချလို့ရပါတယ်။ ပြီးရင် သွားတိုက်လိုက်ပါ။ မနက်တိုင်း လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကြက်သွန်ဖြူ ၃ မွှာ ၄ မွှာကိုကြိတ်ပြီး ဆား လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ / ၄ ပုံနဲ့ရောလိုက်ပါ။ ပြီးရင် သွားပိုးစားတဲ့နေရာမှာ လိမ်းပေးထားပြီး ၁၀ မိနစ်လာက်ထားကာ ပလုတ်ကျင်းချလိုက်ပါ။ သွားအခေါင်းပေါက်ဖြစ်တာကို လျှော့ချနိုငဖို့အတွက် တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်လုပ်ပါ။
သွားကိုက်ရင်တော့ ကြက်သွန်ဖြူကိုပဲသုံးပြီး သွားနားမှာ ပွတ်ပေး ကိုက်ပေး လို့ရပါတယ်။
လေးညှငျ့ပှငျ့ဆီ ၂ စကျ ၃ စကျ နဲ့ နှမျးဆီ စားပှဲတငျဇှနျး ၁/၄ ပုံထညျ့လိုကျပါ။ ပွီးရငျ ဝါဂှမျးလေးနဲ့ တို့ပွီး သှားနားမှာ ကပျပေးထားပါ။ ညအိပျယာမဝငျခငျတိုငျးလုပျပေးပါ။ လေးညှငျးဆီကို မခဏခဏမသုံးဖို့လိုပါတယျ။
ဆားကိုလညျး သှားပိုးစားခွငျး သှားအခေါငျးပေါကျဖွဈခွငျးကနေ ဖွဈပျေါလာမယျ့ သှားကိုကျခွငျးနဲ့ တခွား ကူးစကျရောဂါတှကေို ကာကှယျဖို့သုံးနိုငျပါတယျ။
ဆား လကျဖကျရညျဇှနျး ၁ ဇှနျးကို ရနှေေးတဈခှကျနဲ့ရောလိုကျပါ။ ပွီးရငျ ငုံပွီး ၁ မိနဈလောကျ ပလုတျကငျြးလိုကျပါ။ တဈနေ့ ၃ ကွိမျလုပျနိုငျပါတယျ။
သှားပိုးစားခွငျး၊ သှားခေါငျပေါကျဖွဈခွငျးကို သကျသာစဖေို့သာမက သှားဖုံးသှေးယိုခွငျးနဲ့ ခံတှငျးနံ့ဆိုးတာကိုပါသကျသာစဖေို့အတှကျ နှမျးဆီ စားပှဲတငျဇှနျး ၁ ဇှနျး ကို ပါးစပျထဲထညျ့ပွီး ငုံထားပါ။ ပွီးရငျ မိနဈ ၂၀ လောကျဖွညျးဖွညျးခငျြ ပလုတျကငျြးနပေါ။ ဆီကိုမမွိုခဘြဲ ထှေးထုတျလိုကျပါ။ ပွီးရငျ ရနှေေးလေးနဲ့ ဆေးခပြါ။ ဆားရညျနဲ့လညျး ဆေးခလြို့ရပါတယျ။ ပွီးရငျ သှားတိုကျလိုကျပါ။ မနကျတိုငျး လုပျနိုငျပါတယျ။
ကွကျသှနျဖွူ ၃ မှာ ၄ မှာကိုကွိတျပွီး ဆား လကျဖကျရညျဇှနျး ၁ / ၄ ပုံနဲ့ရောလိုကျပါ။ ပွီးရငျ သှားပိုးစားတဲ့နရောမှာ လိမျးပေးထားပွီး ၁၀ မိနဈလာကျထားကာ ပလုတျကငျြးခလြိုကျပါ။ သှားအခေါငျးပေါကျဖွဈတာကို လြှော့ခနြိုငဖို့အတှကျ တဈနေ့ ၂ ကွိမျလုပျပါ။
သှားကိုကျရငျတော့ ကွကျသှနျဖွူကိုပဲသုံးပွီး သှားနားမှာ ပှတျပေး ကိုကျပေး လို့ရပါတယျ။
Posted in ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ LeaveaComment on သှားပိုးစားခွငျးနဲ့ သှားအခေါငျးပေါကျဖွဈခွငျးကို သကျသာစမေယျ့ သဘာဝနညျးလမျး
အတကျရောဂါ အတှကျ ဆေးနညျးလေး မြှဝပေါတယျ
အတက်ရောဂါ အတွက် ဆေးနည်းလေး မျှဝေပါတယ်
စိတ်ပျက်ဖွယ်လည်းကောင်း၏။ ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ဖွယ်လည်းဖြစ်ပြန်သည်။မိသားစုဆွေမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းထဲတွင် တက်တတ်သူပါလျှင် အလွန်စိတ်ညစ်ရသည်။
အကြောင်းမှာ အချိန်မရွေး တက်ခြင်းကြောင့်ပင်။တက်ပါပြီဆိုလျင် တက်သူရော နှိပ်နယ်ရသူမှာပင်ပန်းဆင်းရဲရပြီ အသက်အန္တရာယ်လည်း များလှ၏။
ညီငယ်တစ်ဦးအတက်ရောဂါဖြစ်ဖူး၏ ။ညီလေးသည် ဆေးလည်းအတော်စုံလှသူဖြစ်နေလေပြီ ။
အတက်ရောဂါနှင့်ပတ်သက်ပြီး သမားတော်ကြီးဦးကြွယ်ထံမှအလွန်အစွမ်းထက်သော ဆေးနည်းရ၍ ညီငယ်လေးမှာသက်သာရာမှ အပြီးတိုင် ပျောက်ကင်းခဲ့သည်။
စပါးကြီးသည်းခြေ လက်ဖက်စားဇွန်း ၁ဇွန်း
ဆား ၃ပဲ သား
ထို ၅ မယ်အားရောစပ်ပြီး နံက်ည လက်ဖက်ရည် အကြမ်းပန်းကန် ၁ခွက်စီ သောက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အကြောင်းမှာ အတက်ကျချိန်တွင် အင်အားနုံးချိသွားကာဖြူဖက်ဖြူလျော်ကျန်ခဲ့ရသည့်အပြင် စိတ်စွဲလန်းစိတ်ဖြင့်တက်မည့်အချိန်ကို ကြို၍ ကြောက်နေရခြင်းဖြစ်လေသည်။
ထိုဆေးဖြင့် အတက်ရောဂါစွဲနေသူပျောက်ကင်းဖူးပါ၍ လိုသူတို့ စမ်းသုံးနိုင်ပါရန် တင်ပြမိပါသည်
စိတျပကျြဖှယျလညျးကောငျး၏။ ထိတျလနျ့ကွောကျရှံ့ဖှယျလညျးဖွဈပွနျသညျ။မိသားစုဆှမြေိုးအသိုငျးအဝိုငျးထဲတှငျ တကျတတျသူပါလြှငျ အလှနျစိတျညဈရသညျ။
အကွောငျးမှာ အခြိနျမရှေး တကျခွငျးကွောငျ့ပငျ။တကျပါပွီဆိုလငျြ တကျသူရော နှိပျနယျရသူမှာပငျပနျးဆငျးရဲရပွီ အသကျအန်တရာယျလညျး မြားလှ၏။
ညီငယျတဈဦးအတကျရောဂါဖွဈဖူး၏ ။ညီလေးသညျ ဆေးလညျးအတျောစုံလှသူဖွဈနလေပွေီ ။
အတကျရောဂါနှငျ့ပတျသကျပွီး သမားတျောကွီးဦးကွှယျထံမှအလှနျအစှမျးထကျသော ဆေးနညျးရ၍ ညီငယျလေးမှာသကျသာရာမှ အပွီးတိုငျ ပြောကျကငျးခဲ့သညျ။
စပါးကွီးသညျးခွေ လကျဖကျစားဇှနျး ၁ဇှနျး
ထို ၅ မယျအားရောစပျပွီး နံကျည လကျဖကျရညျ အကွမျးပနျးကနျ ၁ခှကျစီ သောကျခွငျးဖွဈပါသညျ။
အကွောငျးမှာ အတကျကခြိနျတှငျ အငျအားနုံးခြိသှားကာဖွူဖကျဖွူလြျောကနျြခဲ့ရသညျ့အပွငျ စိတျစှဲလနျးစိတျဖွငျ့တကျမညျ့အခြိနျကို ကွို၍ ကွောကျနရေခွငျးဖွဈလသေညျ။
ထိုဆေးဖွငျ့ အတကျရောဂါစှဲနသေူပြောကျကငျးဖူးပါ၍ လိုသူတို့ စမျးသုံးနိုငျပါရနျ တငျပွမိပါသညျ
Posted in ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ LeaveaComment on အတကျရောဂါ အတှကျ ဆေးနညျးလေး မြှဝပေါတယျ
Posted on October 3, 2020 October 3, 2020 by Shangyi
ရှားစောင်းလက်ပပ်ပင်ဟာအထူး ယုယုယယဂရုစိုက် စိုက်ပျိုးစရာ မလိုတဲ့အပင်ပါ။
နေ့တိုင်း ရေလောင်းစရာ မလိုဘူး။
ရှားစောင်းလက်ပပ်အရွက်မှ ထွက်လာတဲ့ အစေးက ရောင်ရမ်းမှုကို ကျစေတဲ့ ဓာတ်ပစ္စည်းတွေအမြောက်အမြား ပါတာတွေ့ရပါတယ်။
အနာသက်သာစေတဲ့ စီရာဒီကိုင်နေ့(စ်) ဆိုတဲ့ ဓာတုဓာတ်ပစ္စည်း တွေလည်းပါပါတယ်။
အရေပြားနေလောင်ခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းအပူလောင်ခြင်းစတဲ့ အရေပြား ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရတဲ့အခါ ဒဏ်ရာကို ရေ၊ ဆပ်ပြာတို့နဲ့ စင်ကြယ်အောင်ဆေးကြောပြီး ရှားစောင်းလက်ပတ်ပင်အရွက်ကို နည်းနည်းလှီးကာ ထွက်လာတဲ့အစေးနဲ့ ဒဏ်ရာကို တစ်နေ့ (၃) ကြိမ်လောက် လိမ်းပေးပါက အနာသက်သာစေပြီး မြန်မြန်ကျက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ရှားစောငျးလကျပပျပငျဟာအထူး ယုယုယယဂရုစိုကျ စိုကျပြိုးစရာ မလိုတဲ့အပငျပါ။
နတေို့ငျး ရလေောငျးစရာ မလိုဘူး။
ရှားစောငျးလကျပပျအရှကျမှ ထှကျလာတဲ့ အစေးက ရောငျရမျးမှုကို ကစြတေဲ့ ဓာတျပစ်စညျးတှအေမွောကျအမွား ပါတာတှရေ့ပါတယျ။
အနာသကျသာစတေဲ့ စီရာဒီကိုငျနေ့(ဈ) ဆိုတဲ့ ဓာတုဓာတျပစ်စညျး တှလေညျးပါပါတယျ။
အရပွေားနလေောငျခွငျး၊ ထိခိုကျဒဏျရာရခွငျးအပူလောငျခွငျးစတဲ့ အရပွေား ထိခိုကျဒဏျရာ ရတဲ့အခါ ဒဏျရာကို ရေ၊ ဆပျပွာတို့နဲ့ စငျကွယျအောငျဆေးကွောပွီး ရှားစောငျးလကျပတျပငျအရှကျကို နညျးနညျးလှီးကာ ထှကျလာတဲ့အစေးနဲ့ ဒဏျရာကို တဈနေ့ (၃) ကွိမျလောကျ လိမျးပေးပါက အနာသကျသာစပွေီး မွနျမွနျကကျြမှာဖွဈပါတယျ။
Posted in ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ LeaveaComment on အိမျထဲမှာ ရှားစောငျးလကျပတျစိုကျလိုကျပါ